Dhalli namaa ija sarootaa ilaalee fedhii isaanii baruu danda'aa? - BBC News Afaan Oromoo
Dhalli namaa ija sarootaa ilaalee fedhii isaanii baruu danda'aa?
Ija saree wayita ilaaltan, waa isinitti himataa akka jiran ykn isinirraa waa akka barbaadan yoo isinitti dhagaahame, sana jechuun ijji isaanii akka miira keessan qabachuu danda'uutti guddataa jira jechuudha.
Maashaan naannoo ija sareetti argamu fedhiin saroonni ibsatan dhala namaatiif galuu akka danda'utti suuta guddachaa dhufuu qorattoonni bira gahaniiru.
Maashaan xiqqoon fuula isaaniirra jiru "daa'immanii xixiqqoo" akka isaan fakkeessuufi sunis miira "isaan kunuunsuu" nama keessatti uuma.
Saree daa'ima lubbuun awwaalamte baraarte
Dubartii saree oolchuuf naachaan ajjeefamte
Qorannoonni kun akka argasiisutti "ijji saree" akka isaan namoota waliin hariiroo ykn walitti dhufeenya jaba uumanii jiraataniif isaan gargaaruusa agarsiisa.
Jijjiiramni tirannaa (Evolution) maashaa naannoo ija sarootaa irratti mul'ataa jiru kun kan qorattoonni "nyaara waa ibsu" jedhanii waaman isaanii "wal qunnamtii kan dhala namaa fakkaatu akka uuman" isaan gargaaraa.
"Yeroo saroonni sochii uuman, akka namoonni isaan kunuunsaan waan barbaadan fakkaata," jedhu qorattuun qorannoo kanaa Dr Juliane Kaminski .
Jijjiiramni maashaa kun "ijji sarootaa guddatee akka mul'atu, ija daa'ima akka fakkaatuu fi sochii namni gadda keessa jiruu mul'isuun akka wal fakkaatu ta'aa jira.
Akka qorattuun kun jettutti jijjiiramni kun dhalli nama "osoo hin yaadiin" sarootaaf akka garaa laafuu fi akka kunuunsuu taasisa.
"Ragaan kun ega saroonni Yeeyyii waliin madaqanii booda akka maashaa keessa nyaaraa guddiifatan isaan taasiseera, " jedhu Dr Kaminski.
Argannoon UK fi USA akka agarsiisutti jijjiiramni maashaa fuula sarootaa kun waggoota kumaatama keessa saroota nama waliin jiraatan irratti kan mul'ataa dhufedha.
Qorataa yuunivarsiitii USA kan ta'an piroofeesar Anne Burrows akka jedhanitti, "jijjiiramni maashaa fuula sarootaarra jiru "saffisaan" ta'uusafi jijjiiramni kun immoo akka isaan haala salphaadhan dhala namaa waliin walii galaan isaan taasiseera" jedhu.
'Saroonni akka hin dutne dhorkamuu qabu'
Piroofeesar Bridget Waller gama isaaniitiin akkas jedhu, "kun miirri fuula keenyarra jiru hagam qalbii namaa hatuu akka danda'uufi hammam jabaa akka ta'e agarsiisa".
Viidiyoo Sareen cucitii haadha hinqabnee kunuunsaa jirti
Taayilaanditti sareen daa'ima lubbuun awwaalamte baraarte